​सपना पनि नराम्रो देख्छु, छोरा तिमी अप्ठ्यारोमा पर्यौ की ?
Fri, Apr 20, 2018 | 12:47:50 NST
19:23 PM (1 year ago)
Total Views: 51.4 K
सर्लाहीको गौरीशंकर ५ का सुकेश्वर महतोले केहि दिन अघि नराम्रो सपना देख्नुभयो । यसै त आत्तिएको सुकेश्वरको मन सपनाले झनै आत्तियो । ठिकै कमाइरहेको अनि फोन पनि गरिरहेको छोरो एक्कासी सम्पर्कविहिन भएपछि सुकेश्वको भोक निद्रा सबै हराएको छ । सुकेश्वरका छोरा रामईश्वर साउदी गएको ६ वर्ष भयो । त्यो भन्दा अघि उहाँ कतार जानुभएको थियो । तर ६ महिनामै कम्पनी बन्द भएर फर्किनुभयो । कतारबाट फर्किए पनि विदेश जाने रहर भने हटेन । त्यसैले फेरि विदेश जाने तयारी गर्न थाल्नुभयो । फेरि विदेश जाने भन्ने थाहा थियो सुकेश्वरलाई तर कसले पठाउने अनि कहाँ जाने केहि थाहा थिएन ।
त्यसैले सुकेश्वर खेतबारीकै काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । त्यतिकैमा एक दिन रामईश्वर खेतमै पुगे त्यो पनि विदेशका लागि पैसा माग्न । रामईश्वरले पहिलेको भोगाइले सिकेको कुरा गर्नुभयो । ‘उसले पहिले कतार जाँदा भाग्यले साथ दिएन अब चाहिँ साउदी जान्छु बुवा खर्च चाहियो भन्यो केहि गर्छु भन्नेलाई कसरी रोक्नु’ सुकेश्वर भन्नुहुन्छ । छोराले भनेपछि सुकेश्वरले नाइ भन्न सक्नुभएन । तर छोराले विदेश जान मागेको ९० हजार उहाँसँग थिएन । त्यसैले ९० हजार ऋण खाजेर छोरालाई दिनुभयो । पैसा दिएको दिएको एक महिनामा कन्स्ट्रक्सनको काममा हरकटुवा–४ का अरुण महतो मार्फत साउदी जानुभयो । साउदी पुगेपछि रामईश्वरले काम र कमाइ ठिकै छ भनेर फोन गर्नुभयो । ४ वर्षमा ५ लाख रुपैयाँ पनि पठाउनुभयो । त्यतिबेला उहाँको परिवार खुसी थियो । यो खुसी साढे ४ वर्षसम्म उस्तै थियो तर त्यसपछि भने त्यो खुसी दुःखमा परिणत भयो ।
त्यतिञ्जेल फोन गरिरहेका रामईश्वरको फोन आउन छोड्यो । उहाँले दिएको अनि सँधै गरिरहने नम्बरमा फोन लाग्न छोड्यो । ‘अरु बेला चिन्ता त लागिहाल्छ उसँगै गएका उसका साथी फर्के पनि ऊ चाँही नफर्किंदा मन थाम्न गाह्रो हुँदो रहेछ’ सकेश्वरले भन्नुभयो ।
डेड बर्ष अघि रामईश्बरले अन्तिम पटक फोन गर्दा अहिले कम्पनी छोडेर भागेर काम गर्न लागेको भन्नुभएको थियो । त्यसपछि न फोन आयो न त कुनै खबर नै । त्यसमाथि छिमेकीले गर्ने अनेकथरीका कुराले परिवारका सबैको मन आत्तिएको छ । छिमेकीहरु कोही कुनै समस्यामा परेकाले फोन नगरेको होला नभए त फोन त गरिहाल्छ नी भन्छन् । त्यसले सुकेश्वरलाई तर्साउँछ । उहाँ त्यति बेला त्यही नराम्रो सपना सम्झिनुहुन्छ । तर सम्हाल्न निक्कै गाह्रो पर्छ सुकेश्वरलाई । गाउँमा त्यसरी हराएकाहरु धेरै जेलमा पनि परेका हुन्छन भन्छन त्यैं माथि रामईश्वरले भागेर काम गर्न लागेको भनेकाले उहाँ आत्तिनुभएको छ ।
अहिले त रामईश्वरका छोरा नितेश साढे ५ वर्षका भइसके । नाति छेउमा आएपछि सुकेश्वसँगै रहेकी श्रीमती सगियादेवी बोल्न नपाउँदै भक्कानिनुभयो । ‘गाउँमा अरुका बुवा आउदा हाम्रो बुवा कहिले आउनु हुन्छ आमा भनेर सोध्दछ मैले के उतर दिनु ?’ सगियादेवी भन्नुहुन्छ ‘कहिले आउँछ थाहा छैन ।’ नातिको अनुहार हेरेर रोएर मन बुझाउनु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन सगियादेवीसँग । बुवाको अनुहार नसम्झिए पनि नितेश साथीहरु सँग खेल्दा मेरो बुवाले विदेशबाट खेल्ने कार ल्याईदिनु हुन्छ भन्दा परिवारका सबैका आँखा भरिन्छन् । छोरा बेपत्ता भएपनि खान लाउन संकट छैन उहाँको परिवारमा । तरकारी खेती गरिरहेका सुकेश्वले अहिले पनि वर्षको डेढ लाख जति कमाइरहनुभएको छ । तर पनि छोरा भए जस्तो नहुने गुनासो छ उहाँको ? यदी रामईश्वर अप्ठ्यारोमा परेको भए र कसैलाई थाहा भए खबर गरिदिन उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘यदी यो खबर तिमीसम्म पुग्यो भने एक पटक जसरी पनि घरमा फोन गर्नु अनि यदी कसैले उसम्म पुर्याइदिनुभयो भने तपाईंको पुण्य हुन्छ ।’ सुकेश्व भनिरहनु भएको छ ।